Nepalistudio » मकर संक्रान्तिः किन र कसरी मनाउने ? मकर संक्रान्तिः किन र कसरी मनाउने ? – Nepalistudio
तिहारको सेलरोटी, दशैंको मासु भनेजस्तै माघे संक्रान्तिको पनि खास परिकार छ । घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, तरुल खाएर मनाइन्छ । यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, वस्त्र आदि खाने र दान गरेमा शरीर पोषिलो हुनका साथै निरोगी हुने विश्वास छ ।
मकर संक्रान्तिदेखि सूर्य उत्तरतर्फ आउन थाल्छ । अर्थात गर्मी मौसम सुरु हुन्छ । दिन लामो र रात कम हुन्छ । अन्धकार कम हुन्छ । सूर्यको प्रकाश तेज हुन्छ । प्रकाश अधिक हुने भएकाले प्राणिको चेतना र कार्यशक्तिमा वृद्धि हुन्छ ।